Ruushka oo hubkii ugu badnaa siiyay Armiiniya kadib markuu Turkigu hadlay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Aserbajaan ayaa sheegtay inay qaaday weerar rogaal celina kuna qaaday fadhiisimo ay joogaan kuwa Armiiniya ee Ruushku taageero oo haysta dhul balaadhan oo ka tirsan Aserbajaaan. Turkiga oo ka hadlay weerarka Aserbajaan ayaa sheegay in Aserbajaan keli ahayn oo Turkigu garab taagan yahay.
Ruushka ayaa saldhig weyn ku leh agagaarka caasimada Armiiniya, waxana la arkaayay dhaqdhaqaa ciidan oo aad u socda iyo diyaarado soo degaya oo hub waaweyn wada.
Aserbajaan oo ka tiro iyo dhaqaale badan Armiiniya ayaa waxa ciilay askar xumo iyo tayada hubkeeda oo aan fiicneyn taas oo keentay in Armiiniya oo Ruushku wato ay soo eryadaan dhul badana ka qabsadaan.
Aserbajaan ayaa sanadihii u dambeeyay ku bixisay malaayiin doolar ayadoo taageero ka helaysa Turkiga dib u dhiska ciidankeeda. Turkiga iyo Aserbajaan ayaa isku ah qabiilka Turkiiga loo yaqaan ee sida balaadhan u dega midowgii Soofiyeeti.
”Tayada ciidanka Aserbajaan ayaa aad u liidata xataa xilligii Soofiyeetka waxa yaraa ama aan jirinba saraakiisha Aseeriyiinta ee ku jira ciidankii weynaa ee Soofiyeetka halka Armiiniyiinta ka buuxeen ayuu yiri khabiir Ruusha.
Si kastaba ha ahaatee haddii uu qarxo dagaal daba dheeraada ee u dhexeya Ruushka hubeynaya Armiiniya iyo Aserbajaan oo ay la jiraan wadamadii ku jirey Soofiyeetkii ayaan laga gaaray guul weyn, waana arinta Ruushka iyo Turkigu jeclayn inay dhacdo.
Waxase meesha ku jirta in Armiiniya la tuso inayna xoog ku haysayn dhul Aserbajaan leedahay ayadoo qaxootigii ka soo qaxay halkaasi welli degan yihiin caasimada Baakuu.